Maxay tahay sirka ka dambaysa in SOMALIA caalamku ku loollamo?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay tahay sirka ka dambaysa in SOMALIA caalamku ku loollamo?!
Maxay tahay sirka ka dambaysa in SOMALIA caalamku ku loollamo?!
(Hadalsame) 18 Maarso 2019 – Waxaa jira 4 marin-biyood oo maraakiibta sida shidaalka ay maraan 80%. 4-tan Marin-biyood waxey lafdhabar u yihiin dhaqaalaha caalamka, sidaa darteed goobaha ay ku yaalaan marin biyoodyadani waxey noqdeen goobo ay ku hardamaan wadamada caalamka ugu awooda badan, waxeyna ku leeyihiin Saldhigyo ciidan si ay danahooda ugu ilaashadaan.
Dalalka Jabuuti iyo Yemen ayuu ku yaal halka ugu dhuuban marinkan oo (18 miles) keliya ah balaciisa. Baab Al Mandab waa marinka ugu qalalaasaha badan maxaa yeeley dhinaca Yemen waxaa gacanta ku haya falaagada Xuudiyiinta oo gacansaar la leh dalka Iraan waxeyna dhamaadkii bishii Juley 2018 gandaal ku rideen oo ku qasbeen in dib u laabtaan laba markab oo Sacuudiga lahaa oo sidey midkiiba shidaal gaarayey hal malyan oo fuusto. Waana sababta ay hadda dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka u doonayaan in ay saldhig milatari ka sameystaan magaalada Berbera.
Dalka Jabuutina muhiimka ka dhigey oo ay saldhig ciidan ugu leeyihiin dalaka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska iyo Talyaaniga si marinkaa danahooda ugu ilaashadaan. Waxaa sidoo kale badda cas iyo badweynta hindiya ku sugan maraakiib tira badan oo dagaal oo kala leeyihiin Ruushka, Wadamada Reer Yurub, Shiinaha iyo Mareykanka kuwasoo qaarkood ku jooga in ay la dagaalayaan burcad badeedda Soomaalida.
Kan Afaraad waa Kanaalka Suweys oo ay maraan gebi ahaan maraakiibta ka gudubta marinka Baab Al Mandab.
Wadanka Soomaaliya oo ku yaal meel aan ka fogeyn Baab Al Mandab sababtaas ayey quwado badan oo caalamka ay ugu loollamayaan, marka laga tago dekadaheena iyo shidaalka.
Previous articleGoolwalihii qaranka NZ oo ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee Jimcaha
Next articleXag-jir xikmad malaha xag kastaba ha joogee! (Arag is-dardarka doodda ninkii masaajidda weeraray)